I-China Luminous Sign fektri kanye nabakhiqizi | I-Grand Luminous
Izimpawu ze-Luminous Sign Luminous kanye nezimpawu zomzila wendlela zikhanya kahle ebumnyameni ngokuphelele futhi zikhanyisela indlela yokuphuma lapho umzila we-egress umnyama noma umenyekile. Izici zesistimu ziyasebenza futhi zikhanye ngokuzenzakalelayo lapho izibani ziphuma futhi zisebenza mahhala kunoma yikuphi ukungenelela komuntu, okwenziwa ngomshini noma kagesi noma ngabe yonke imithombo yamandla kagesi nebhethri yehluleka. Qamba igama ngokwezifiso ezikhanyayo embonweni wezimpawu eziyisiqalo esimnyama Material 1mm / 1.2mm esikhanyayo sePVC, 0.0mm okhanyayo ...
Ishidi elikhanyayo le-PVC elingu-1mm / 1,2mm, elikhanyayo elingu-0.25mm elikhanyayo
Izimpawu zokuphrinta kwesikriniIzimpawu zokususa: Sebenzisa i-ink enobungane yezemvelo yaseJapan Izimpawu zangaphandle: Sebenzisa uyinki onobungane bemvelo we-UV
Izinto zethu futhi imikhiqizo yenziwa ngefomathi eqinile ye-pvc board eqinile nebhodi ye-aluminium, izinto zokwakha ezisebenzayo. We ifaka kakhulu i-strontium-grade strontium ejikeleze kakhulu ngaphakathi kwe-stroluminescent pigment efakwe ngaphakathi futhi ihlakazeke ngokulinganayo kuwo wonke amashidi we-pvc we-0.3mm obukhulu noma i-0.8 ~ 1mm board. Izimpawu nezimpawu zethu ze-aluminium ze-Luminous aluminium-retardant, water-, corrosion- futhi zingahambisani nomthelela. I-high-luminance strontium aluminate Photoluminescent pigment isetshenziswa ngqo kumashidi we-aluminium ngokusebenzisa inqubo yethu smart. Yonke imikhiqizo yethu ikhiqiza i-afterglow ekhanyayo, ehlala isikhathi eside ibonakala amahora angama-8 noma ngaphezulu futhi ikhahlela ngokugcwele ngehora noma ngaphansi lapho ukukhanya kubuyiswa.
I-Photoluminescent Exit Sign, i-UL 924 ibalwe 50 izinyawo. I-7 intshi ukubhala, I-Aluminium Sign ngesizinda esiluhlaza.
Ukucaciswa kwesignesha ye-UL 924:
Lesi sibonakaliso sokuphuma kufanele sikhokhiswe okungenani imizuzu engama-60 ukuze sisebenze ngokuphelele.
Umthombo wokukhanya wangaphandle kumele uthembeke futhi uhlinzekwe yisifunda esingalawulwa yisibali sikhathi noma inzwa ezenzakalelayo.
Imibhalo yokukhanyisa yangaphandle kufanele ifinyeleleke kuphela kubasebenzi abagunyaziwe.
Umthombo wokukhanya wangaphandle kufanele unikezwe amandla ngaso sonke isikhathi ngesikhathi sokuhlala.
amazinga wokukhanyisa ebusweni bezimpawu kufanele aqinisekiswe ngemuva koshintsho ekukhanyisweni kwangaphandle
Kuyanconywa ukuthi kuhlolwe ngezikhathi ezithile kwenziwe ngamakhodi asebenzayo.
Faka lolu phawu ngaphakathi ezindlini kuphela, lapho lungazange luvezwe khona ukukhanya kwelanga, umswakama noma amazinga okushisa angaphandle kwebanga le-+10 degree ukuya kuma-40 degree C.
Ukwenza kusebenze - Ubuncane bamakhandlela angaphansi kwama-5 (54LUX) wangaphandle we-inforeshi we-infores ongabonakali kufanele abekhona ebusweni bezimpawu ngaso sonke isikhathi ngesikhathi sokuhlala.
Ukufakwa - Kunikezwe izimbobo ezine zokukhwela. Maka izindawo ezifakwa yisikulufu odongeni. Drill amahange izimbobo, faka amahange bese ufaka uphawu lokuphuma usebenzisa izikulufa ngokusebenzisa izimbobo zokufaka.
Ukuhlanza - Ukuhlanza isibonakaliso sokuphuma kufanele kwenziwe ngendwangu engeyona eyolukisayo encishisiwe ngamanzi. Musa ukusebenzisa amakhemikhali amakhemikhali.
Izimpawu Zokuphuma - Ukufakelwa kukagesi kwe-Photoluminescent UL 924 akusafuneki!
Akunazintambo - Awukho Ugesi - Ongewona umsakazo. I-Ul 924 Exs Signs ihlangana futhi idlule imibandela yokubukeka edingekayo kuma-UL 924 Photoluminescent Exit Signs. Izimpawu ze-UL 924 zokuphuma, ngemuva kokudalulwa kwamakhandlela angama-5 ezinyawo zokukhanya kwe-fluorescent okwemizuzu engama-60 kuyabonakala futhi kuyaqondakala ebumnyameni ngokuphelele kubabukeli kusuka kumamitha angama-50 noma ayi-100 ngemuva kokukhishwa konke ukukhanya.
Izimpawu zethu zokuphuma kwe-Phototoluminescent Exit akuzona i-Radioactive.
Isibonakaliso sokuphuma se-Photoluminescent UL 924 yisinqumo esihle kulabo abafuna ukonga imali futhi balondoloze amandla. Kwenziwe nge-aluminium esindayo engaphezulu kwesiginali isibonakaliso sinobude obufakwe ku-ETL obude bezinyawo ezingama-50 futhi wedlula wonke amakhodi amakhulu wokwakha kufaka neNFPA 5000 neLife Safety 101. Ingasetshenziswa ekwakhiweni okusha noma esikhundleni sezimpawu ezikhona zikagesi. Ukugoqa kuyatholakala, yize zonke izibonakaliso ziza nezimbobo ezi-4 ezikhuphukayo zokwenza Ukufakwa kube ngesifinyezo. Ngokuphila isikhathi eside seminyaka engama-25 futhi, azidingi ugesi (lolu uphawu lokuphuma olunamandla), asikho isipele sebhethri (ngokungafani nezimpawu zokuphuma kwe-LED), noma ukulungiswa kwanyanga zonke okuholela ekugcineni imali.
Esedlule: Amabhodi we-Photoluminescent PVC Rigid
Olandelayo: Izipikili Zokusuka Kwaphansi